Iyo Raspberry Pi Foundation yakaisa muchivande Microsoft repository | Kubva kuLinux
Mazuva mashoma apfuura nhau dzakaburitswa icho sechikamu chekuvandudzwa kwazvino muRaspberry OS, iyo Raspberry Pi Foundation yakaisa Microsoft repository pamakomputa ese ega ebhodhi aivimba nayo, pasina ruzivo rwevaridzi vayo.
Iyo manejimendi haina kuenda isina kucherechedzwa mukati memunharaunda yeLinux iri kukwira kumusoro kupokana nekushayikwa kwekujeka uye telemetry uye vashandisi veRaspberry Pi mabhodhi vari kukurukura kusanganisira kufona kunzvimbo yeMicrosoft paRaspberry Pi OS, pamwe nekuwedzera kweMicrosoft GPG kiyi yekuvimbika kwepakeji yekuisa.
Iyo Microsoft repository inowedzerwa neiyo raspberrypi-sys-mods package, iyo inosanganisira anoshanda system-yakatarwa zvinyorwa uye marongero.
Iko kumisikidzwa kwe /etc/apt/source.list.d kunogadziriswa neiyo post-inst script uye inoshandiswa kugadzirisa iyo VSCode nharaunda yekuvandudza. Iwo makuru ekutaura ane hukama nekuti iyo Microsoft repository uye kiyi yakawedzerwa pasina yambiro vashandisi.
Pfungwa yekuseri kwekuwedzera iyo Microsoft apt repository ndeyekuti zvive nyore kushandisa iyo Visual Studio Code yekuvandudza nharaunda.
Zvepamutemo imhaka yekuti vanotsigira Microsoft IDE (!), Asi iwe uchaiwana kunyangwe iwe ukaiisa kubva pamufananidzo wakajeka uye shandisa yako Pi isina musoro usina GUI. Izvi zvinoreva kuti pese paunoita "apt kugadzirisa" paPi yako, urikubaya Microsoft server.
Ivo zvakare vanoisa iyo Microsoft GPG kiyi iyo inoshandiswa kusaina mapakeji kubva kune iyo repository. Izvi zvinogona kutungamira kune chiitiko apo gadziriso inokwevera kutsamira kubva kuMicrosoft repository uye iyo sisitimu yaizozvivimba iyo package.
Iyo yekumisikidza yekumisikidza inoitwa chinyararire, pasina mushandisi mvumo, uye iyo Raspberry Foundation haina kugadzirira vashandisi shanduko yakadaro kuburikidza yakatsaurwa blog blog.
Vashandisi vakatsamwa vanotaura kuti eAya maitiro ane njodzi nekuda kwezvikonzero zviviri:
Kutanga, pese panowanikwa ruzivo rwekuchengetedza kana uchiisa kana kuvandudza mapakeji, maneja wepakeji anoongorora zvese zvakabatana zvakabatana, ndokuti, eIyo Microsoft server inounganidza ruzivo nezve IP kero dzevashandisi vese Raspberry Pi inoshanda sisitimu, iyo inogona kushandiswa kugadzira mushandisi chimiro.
Iyo yakafanana nhoroondo inogona kushandiswa, semuenzaniso, kune yakanangwa kushambadzira kana uchipinda muMicrosoft services kubva kune imwechete IP.
Chechipiri, iyo yekuchengetera yeMicrosoft yakabatana seyakavimbika zvizere, kunyangwe hazvo isiri pasi pekutonga kwevanogadzira iyo Raspberry Pi inoshanda sisitimu uye vashandisi havana kubvunzwa kusimbiswa kuwedzera iyo Microsoft GPG kiyi. Kana zvivakwa zveMicrosoft zvikanganiswa kuburikidza nechengetedzo yakadaro, manyepo enjodzi anogona kugoverwa kutsiva akajairwa mapakeji kana kutsiva kutsamira.
Iyi ndiyo nzira yaunoita nayo zvinhu nguva dzese "kune matambudziko akafanana" usinga zivise varidzi veyako mutsara wekombuta imwe chete yemakomputa. »Vashandisi vayeuka kunetsana kuri pakati peLinux neMicrosoft pamusoro peterevhizheni.
Chekupedzisira, zvinoonekwa kuti kugoverwa kweRaspbian kunotsigirwa nharaunda hakukanganisike nedambudziko, shanduko inongowedzerwa kuRaspberry Pi OS, musiyano weRaspbian unochengetwa neRaspberry Pi Nheyo.
Imwe nzira ndeyekuvharira Visual Studio Code kana iwe uchida kuenderera uchishandisa iyo Raspberry Pi OS. Visual Studio Code yakagadzirirwa nesarudzo dzemetmetry, saka vashandisi vazhinji vanoona Visual Studio Codium kuti ive yakakodzera.
Kubvisa kupinda kumaseva eMicrosoft muRaspberry Pi inoshanda system, ingo taura zvirimo mu /etc/apt/source.list.d/vscode.list faira uye bvisa iyo / etc / apt / trust kiyi. Gpg.d / microsoft .gpg.
Zvakare, "127.0.0.1 mapakeji.microsoft.com" inogona kuwedzerwa kune / etc / hosts kuvharira zvikumbiro.
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Iyo Raspberry Pi Foundation yakavanda muchivande Microsoft repository